Ihhovisi plankton. Lokhu ibinzana empilweni yesimanje akuyona into engavamile. Zonke okungenani cishe, kwakushiwo ukuthini. Lo mqondo kufingqwe abasebenzi ehhovisi, ovame awunawo abasebenzi nizithobe, hhayi matasa kakhulu emini emsebenzini, futhi kusukela lapho umphumela wokugcina kwenhlangano (izinkampani, amabhizinisi) kuxhomeke ngokwezinga elincane kakhulu.
Lezi comrades uthanda kudlule isikhathi kungxoxo (amahlaya, inhlebo, "amathambo peremyvanie" kanye nabanye), izinkomishi itiye nekhofi, kanye Ukubuyekeza izindaba (lwemibhalo, ukuxhumana nomphakathi, izinkundla, izingxoxo, nokunye. D.) Kuyi-Internet. Abaningi bayayithanda ukusinikela ehhovisi plankton izici ezifana ukuntula injongo ekuphileni, ukuntuleka isinyathelo uyaphika. Mangithi ukuthi bonke abantu abafani, Ngakho-ke, ukuze abeke amalebula ekuseni. Izinto eziza kuqala.
Wonke umuntu iphupho, lapho esifisa. Sonke kufanele imigomo lehlukile. Othile ukuthenga indawo, nabanye - umndeni nezingane, eyesithathu - i-career kwizimboni sesine - kuphela self-ngcono. Ngakho ungaqhubeka okwesikhathi eside. Zicabange ngizé endaweni enkulu noMnyango abasebenzi. Lapha ehhovisi plankton. Njalo isisebenzi edeskini, ikhompyutha, iphepha nehhovisi izimpahla. Kodwa akuyona nje abantu. Kuwufanele silunguze kancane ezijulile futhi uzobona umuntu ngamunye kanye nemigomo ngabanye. Kuthiwani uma umsebenzi ehhovisi - isinyathelo esisodwa nje ukuyifinyelela?
Ake sicabangele izibonelo ezilandelayo.
Uma umgomo ozibekele wona - umsebenzi, khona-ke "planktonstvo" - kuyisinyathelo siqala ephansi. Uma ukuphila eziza kuqala oyisihlobo somndeni, umsebenzi (indawo ithimba) akuyona njengebalulekile. Futhi uma umuntu uthanda ukuhamba? Umsebenzi inikeza ke ngohlangothi zezimali, i umsebenzi encane ikuvumela ukuhlela uhambo entsha. Nalapha futhi, kunezici eziningi ezibalulekile kuye, ezifana abasebenzi, ubudlelwane nalabo abaziphethe, futhi ngokuvamile umsebenzi. Izibonelo ezinjalo eziningi. Okubi nakakhulu, nxa ilitshe engekho noma kunjalo, kodwa lo muntu akazange ukuhambisa esiqondisweni sakhe, saqeda enye inkomishi yekhofi ngombiko, amabhisikidi solitaire.
Uma umgomo shazi look at the plankton ehhovisi ukucinga izinzuzo, singakwazi ukuhlukanisa zokuxhumana. Kuphethe isikhathi eside eqenjini Kuyasiza ukwazi abantu, bafunde ukubaqonda futhi kwenza kube nokwenzeka ukuba ukwazi ukumunca engcono yezinga lazo. Izinzuzo akunakubangelwa inkokhelo, ikakhulukazi uma kuyinto "okuhle", ukutholakala isikhathi, okuyinto ungachitha izinjongo zabo. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi ehhovisi ngaphandle isipiliyoni ngemuva yenu kuyovumelana kancane kancane ukuthola lokhu okuhlangenwe nakho.
Izici ezimbi ezenzeka ekuphileni ehhovisi plankton ukubandakanya ukuhlinzekwa boss ofaka izinkinga, bika futhi uma kukhona kucacile. Omunye ethile - kuba ukuphila umzimba. Kodwa ethile eyinhloko - alinalutho "prosizhivanie ibhulukwe." Uma ufuna ukuvula ibhizinisi, ukuba ahambe kulelo zwe noma ukushiya futhi ukuya nokubuya uhambo emhlabeni - hamba ngoba! Futhi uma usebenza ehhovisi kungahlali ukuphila kwakho iphrojekthi, ngokushesha ulilahle.
Ukuklanywa, ukwakhiwa kanye ne-operation ye-igesi futhi amafutha ahamba Storages
Lewis Carroll sika "ethi Alice in Wonderland": isifinyezo ngiswa abasemqoka abazizwa
Isifo sokuwa. Usizo lokuqala ngesikhathi kokuquleka.